बालकृष्णलाई जेलमा भेटेपछि बाबुरामलाई ‘आत्मग्लानि’ ! — Newskoseli
बालकृष्णलाई जेलमा भेटेपछि बाबुरामलाई ‘आत्मग्लानि’ !
जनयुद्धकालीन झुट्ठा मुद्धमा फसाएर जेलमा राखिएका माओवादी नेता एवं पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका सं‌योजक डा. बाबुराम भट्टराईले बिहीबार जेलमै पुगेर भेटेका छन् ।
ओखल‌ढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमार्फत दोषी ठहर गरिएका नेता ढुंगेललाई डिल्लीबजारस्थित सदर खोरमा पुगेर भेटेपछि डा. भट्टराईले आफूलाई ‘आत्मग्लानि’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘जनयुद्धका सहयोद्धा तथा पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई डिल्लीबजार सदर कारागारमा भेट्दा निकै आत्मग्लानिको अनुभूति भयो’, बिहीबार अपराह्न फेसबुक पेजमा स्ट्याटस लेख्दै डा. भट्टरार्इले उल्लेख गरेका छन्– ‘क्रान्तिलाई ‘अपराध’ मान्न मन कत्ति तयार भएन ।’
वर्तमान राजनीतिक उपलब्धिहरू बालकृष्णसहितका योद्धाहरूको त्यागकै फल भएको भन्दै डा. भट्टरार्इले अगाडि लेखेका छन्– ‘जनयुद्धरूपी क्रान्तिकारी रूखको फल गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी/समानुपातिक लोकतन्त्रको फल मिठो मानेर थपीथपी खाने तर त्यो फलाउने रूखका बालकृष्ण ढुंगेलहरू जस्ता हाँगाहरूलाई बालेर आगो ताप्न कसरी सकिन्छ र ?’